Wararka - Nomoypet Ka Qaybgal CIPS 2019
Nofeembar 20th~ 23rd, Nomoypet ayaa xaadiray 23kard China International Pet Show (CIPS 2019) oo ku taal magaalada Shanghai. Waxaan ku samaynay horumarro badan xagga bixinta suuqa, kor u qaadida wax soo saarka, wada shaqeynta wada xiriirka iyo dhisida sawirka iyada oo loo marayo bandhigan.
CIPS waa bandhiga kaliya ee B2B ganacsiga warshadaha xayawaannada ee Aasiya oo leh 24 sano oo taariikhda ah. Waa markii lixaad oo nooga qaybqaadata CIPS. Waxaan soo bandhignay boqollaalkeen alaabada xamuulka ah taxanaha kala duwan oo ay ku jiraan baqshadaha xaraashka ah, nalalka kuleylka & hayaha laambada, godadka qulqulaya, weelka cuntada & biyo iyo aalado kale oo astaamaha lagu daro oo dhan ah oo dhan. Alaabooyin dhameystiran oo alaabo kala duwan leh oo leh naqshad xariif ah ayaa soo jiidatay macaamiisha badan ee gudaha iyo shisheeyaha ah waxayna ku guuleysteen ammaan fara badan. Qaar ka mid ah macaamiisha cusub ee ka kala yimid dalal kala duwan ayaa xiiso weyn u muujiyay alaabadayada.
Isla mar ahaantaana, qaar badan oo ka mid ah shuraakeyaasheena muddada fog waxay yimaadeen qolkeenna oo waxay lahaayeen xiriir qoto dheer oo nala leh, waxay bixiyeen talooyin qiimo leh iyo fikrado cusub oo alaabooyinkayaga ah, waxay muujiyeen rabitaan xoog leh inay sii wadashaqeeyaan.
Intii lagu gudajiray, waxaa jira alaabooyin cusub oo lagu soo bandhigay waabkeenna, sida suxuunta nuuradda birta ah iyo taangiyada jiinka shanaad, kuwaas oo noqday muuqaal weyn. Macaamiil badan ayaa muujiyay xiisaha ay u qabaan alaabada cusub kadib xirfadaheena iyo soo bandhigida xamaasada leh. Waxaan aaminsanahay in alaabadayada cusubi ay caan noqon doonaan mustaqbalka dhow.
Waxaan sidoo kale helnay faham qoto dheer oo ku saabsan suuqa saadka alaabada waxaanan wax badan ka ogaanay isbeddelada warshadaha ee ugu dambeeyay ee soosaarka wax soo saarka iyada oo loo marayo CIPS 2019, taas oo anaga noo caawin doonta inaan ballaarino suuqa adduunka oo aan u soo saarno alaabo cusub macaamiisheenna.
Nomoypet waxay horumar waara ka sameysay warshadaha alaabada xamaaliga ah iyadoo ay uga mahadcelineyso taageerada iyo aaminaada macaamiisheena. Waxaan sii wadi doonnaa bixinta alaab tayo sare leh oo qiime wanaagsan leh, si loo horumariyo alaabada cusub, si aan u siino adeeg tayo leh macaamiisha adduunka oo dhan.